ရုပ်ပုံများကို Preview ဖြင့်အရွယ်အစားပြောင်းပါ ငါက Mac ကပါ
ရုပ်ပုံမျိုးစုံကိုတစ်ပြိုင်တည်း Preview ဖြင့်ပုံချနည်း
Jordi Gimenez | | Mac OS X ကို, လဲ tutorial
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အသိအကျွမ်းများကကျွန်ုပ်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းတစ်ခုမှာ Mac ပေါ်ရှိပုံတစ်ပုံ၏အရွယ်အစားကိုတစ်ချိန်တည်းမည်သို့ပြောင်းရမည်နည်း၊ အဖြေသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး Third-party application များမလိုအပ်ပါ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့။
သင်တို့ထဲကအတော်များများသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပုံရိပ်များစွာကိုအရွယ်အစားပြောင်းခြင်း၏ဤလုပ်ငန်းကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသိပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော်လူအများစုကဤကဲ့သို့လုပ်ခြင်းကိုမသိကြပေ။ အဆိုပါတာဝန်thatုံ၏အားဖြင့်ပြည့်စုံသည် တစ်ကြိမ်မှာပုံများအုပ်စုတစ်စုအမည်ပြောင်းပါ OS X ကိရိယာတစ်ခုဖြင့် Preview နှင့်ဤအကြီးအ Apple က tool ကိုများစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာအတူ။
ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ထိတွေ့လိုသောပုံအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်ယူပါ ဒီအတွက်သူတို့ကိုအတူတကွရွေးပြီး cmd + down arrow (↓) ဒါမှမဟုတ်ညာဖက်ခလုတ်နှိပ်ပြီး Open with Preview ကိုနှိပ်ပါ။ ယခုရှိသေး၏ Preview လျှောက်လွှာထဲတွင်သူတို့အားလုံးကိုရွေးပါ cmd ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း (သို့) Magic mouse ဖြင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းတို့ကိုနှိပ်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် tools option ကိုနှိပ်ပြီးပုံတစ်ပုံတည်းကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပြုပြင်လိမ့်မည်။
ဒီနည်းနည်းလှည့်ကွက်ပဲ ကိစ္စများစွာအတွက်ကောင်းသော နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်ပင်ကူညီသည်။ ရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုမှာဓာတ်ပုံများ (သို့) ရုပ်ပုံများပါသောအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းတို့၏အရွယ်အစားကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်ချဲ့ရန်အတွက်တည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါဤကိစ္စတွင်အလွန်ကောင်းပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » ရုပ်ပုံမျိုးစုံကိုတစ်ပြိုင်တည်း Preview ဖြင့်ပုံချနည်း
ဟယ်လို! ငါသည်သင်တို့ကိုဤဘာသာရပ်အပေါ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ကြောင်းကိုကြည့်ပါ။ Mac တစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်။ ငါဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံး windows တွေကိုသုံးနေတယ်။ ငါနေဆဲရန်အသုံးပြုရရန်ရှိသည်! ကျွန်ုပ်တွင်ဘလော့ဂ်တစ်ခုရှိပြီးဓာတ်ပုံများကို windows များနှင့်တည်းဖြတ်သောအခါဓာတ်ပုံတစ်ပုံလျှင် ၇၃၀ x ၄၀၀ (ပိုနည်းသော (သို့) ဒီထက်နည်း) ပစ်ဇယ်များကိုအမြဲတမ်းထားတတ်သည်။ ပြproblemနာက Mac နဲ့အလားတူ parameters တွေကိုလုပ်ရင်ဓာတ်ပုံတွေကအရည်အသွေးမကောင်းဘူး။ အကယ်၍ သင်သည်၎င်းကိုအရည်အသွေးကောင်းရှိပါက၎င်းတို့သည်ကြာမြင့်စွာအချိန်ယူရပြီးအချို့သည်ဘေးတိုက်ကြည့်နေတတ်သည်။ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မင်းရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့အနမ်း
သင်၏ iTunes 12 ရှိသင်၏ကိရိယာအားလုံးကို deauthorize လုပ်နည်း
Apple Watch အတွက် LUNATIK Epik အမှုဖွင့်